Warbixin: Bixitaanka AMISOM Oo Tijaabin U Ah Hawlgalka Maraykanka Ee Somalia – Hornafrik Media Network
Ciiddanka hoos taga Hawlgalka AMISOM ayaa bilaabaya inay si Qorsheysan uga baxaan Somalia, marka la gaaro dabayaaqadda bisha December ee soo socota, iyadoo ay sii kordhayaan weerarada iyo cabsida laga qabo Alshabaab.
Ka-bixitaanka AMISOM ee Somalia waxay dhibaato ku noqon kartaa Hawlgalka Maraykanka ka wado gudaha Somalia.
Maraykanka waxaa Somalia ka jooga in ka badan 500 Askari, kuwaasi oo haatan caawiya Ciidanka Somalia.
Daad-gureynta Ciiddamadda ka kala socda 5-ta Waddan ee Jabuuti, Uganda, Burundi, Ethiopia, iyo Kenya ayaa la qorsheeyey, kadib, natiijadda Qaraarkii Golaha Ammaanka ee QM ee Tirsigiisu ahaa 2373, sida laga soo xigtay Sarkaal ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibedda ee dalka Maraykaanka.
Dowladda Somalia waxay maamushaa wax ka yar 59% dhulka Somalia, Halka Alshabaab ay Maamulaan 20% Dhulka Somalia, Kooxda Daacish ayaa iyana 1% ka joogta Deegaanadda Puntland.
Qaraarkaasi waxa uu Hawlgalka AMISOM awood u siiyey inay Hawlgalka sii wadaan ilaa bisha May ee sannadka 2018-ka, iyadoo Tirada Ciiddanka lagu soo koobi doono 21,626 Askari, marka la gaaro bisha December 31-da ee sannadka 2018-ka.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Madaxa Midowga Afrika ee AMISOM, AmbassadorFrancisco Madeira waxa uu shaaciyey inay bilaabanayso qorshaha ay Ciiddanka AMISOM kaga bixi doonaan Somalia, iyadoo la filayo in 1,000 Askari la daad-gureeyn doono dabayaaqada bisha soo socota ee December.
Khubarada ayaa rumeysan in Ka-bixitaankaasi muuqaal kale u yeeli karo Gobalka, iyadoo labadii bilood ee la soo dhafaay ay qaraxyo iyo dilal ka dhaceen Somalia.
Afhayeenka Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM, Robyn Mack ayaa sheegay inay in ka badan 500 Askar Maraykan ah joogaan Somalia , isla markaana la dardar gelinayo Tababarada Ciiddanka Somalia, kuwaasi oo horumar sameeyey, iyagoo Taageero ka helaya Caalamka.
Marka la isku duubo, Xaalladda Ammaanka ee Somalia ayaa u muuqata mid aan la soo dhaweyn Karin.
Sida laga soo xigtay Afhayeenka Taliska Ciiddanka Maraykanka ee AFRICOM, Robyn Mack Qiimeyn ay sameeyeen Taliska AFRICOM waxay sheegaysaa inay Somalia ka hawl-galaan 3,000 ilaa 6,000 oo Dagaalyahano Alshabaab, kuwaasi oo uu xusay inay ku xooggan yihiin Koonfurta Soomaali oo ay Taariikh Joogitaan ku leeyihiin.
Waxa kale oo uu sheegay inay 250 ka tirsan Maleeshiyadda Kooxda Daacish-ta Somalia iyana ka howlgalanaan Goboladda Puntland.
Dhinaca kale, Afhayeenka Taliska Milliteriga AFRICOM waxa uu xusay inay DFS maamusho wax ka yar 60% dhulka Somalia, iyadoo Dagaalamayaasha Alshabaab 20% ka maamulaan Somalia, halka Kooxda Daacish 1% ka joogaan Deegaanadda Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan Qiimeyn Rasmi ah oo laga sameeyey saamiga dhuleed ee ay DFS iyo Alshabaab ka maamulaan Gayiga Somalia ee ay dagaalladu kala qoqobeen.